Arooska iyo aroosada aan soo dhaweyn: Ranveer Singh iyo Deepika Padukone – Filimside.net
Arooska iyo aroosada aan soo dhaweyn: Ranveer Singh iyo Deepika Padukone
Gabadha filimada sameyso sidoo kalena Dance-ga aflaanta diyaariso Farah Khan ayaa ka mid ahayd martidii shalay lagu casuumay arooska Ranveer Singh iyo Deepika Padukone inay ka qayb galaan ee dalka Talyaaniga ka dhacay.
Haddaba Farah Khan ayaa baraha bulshada sawirka sare ku qabsatay oo ah lamaanaha DepVeer oo si rasmi ah isku guursadeen weliba guurkooda dhaqanka reer Kerala ee Koonfurta Hindiya dagaan ayaa lagu saleeyay.
Farah Khan wey tiri aan soo dhaweyno “Arooska iyo aroosada Ranveer Singh iyo Deepika Padukone ee farxada badan ka muuqato waxaan idiin rajeynaa nolol farxad iyo jaceyl fara badan leh!”
Deepika waxaa u qorshe ah in 23-ka bishan xaflad weyn ku qabsato magaalada Banglore oo ay kasoo jeedo waxaana ka qayb gali doonaan eheladeeda balse saxaafada laguma casuumin sida haatan lasii ogaaday.
Ranveer isagana xaflad weyn ayuu Mumbai ku qabsan doonaa 238-ka bishan marka laga soo tago in qoyskiisa iyo asxaabtiisa imaanayaan sidoo kalena saxaafada ayuu Ranveer casuumay inay sawiro qaadan karaan sidoo kalena farxadiisa la wadaagi karaan.
Laakiin xaflada ugu weyn ee Bollywood-ka dhan imaan doonaan waxay qorsheesteen Ranveer iyo Deepika inay Mumbai ku qabsadaan 1 Dec 2018 ama bisha dambe ee nagu soo fool leh waxayna noqon doontaa xaflad sida goob abaal marino lagu bixinaayo loo agaasimi doono.
Shabakada Filimside Waxay Leedahay Hambalyo Ranveer Iyo Deepika Arooska Cusub…..